Kaspersky ကိုမှကြိုက်တဲ့ ကျနော် ဘော်ဒါတွေအတွက် Kaspersky PURE 3.0 v13.0.2.558 | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Kaspersky ကိုမှကြိုက်တဲ့ ကျနော် ဘော်ဒါတွေအတွက် Kaspersky PURE 3.0 v13.0.2.558
Posted on November 16, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	Kaspersky ကိုမှ စွဲစွဲလန်းလန်း သုံးစွဲကြတဲ့ ကျနော်ရဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်Kaspersky ထဲမှာ လုပ်ဆောင်မှု့ အမြင့်မား ဆုံး KASPERSKY PURE လေးကို ပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ အမြင့်ဆုံးလို့ပြောရသလဲ ဆိုရင် 1။ Antivirus 2။ Internet Security 3။ PURE ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ Antivirus ရဲ့ သဘောကတော့ မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာလုံခြုံရေးကိုပဲ အဓိက ဦးစားပေးပါတယ်။ကွန်ပြူတာမှာ Trojan,spyware နဲ့ worm တွေလောက်ကိုပဲကာကွယ်ပေးပါတယ်
ဈေးနှုန်းလည်းသက်သက်သာနဲ့ ဝယ်ယူနိူင်ပါတယ်။39.95 ဒေါ်လာလောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲဒီမှာတောင်
၁ ယောက်သုံး၊ ၃ယောက်၊ ၅ယောက် ၊၁၀ယောက် သုံးဆိုပြီးတော့ ရှိပါသေးတယ် အောက်မှာ လေ့လာကြည့်ပါ.
Advanced Antivirus – protection against computer viruses, worms, Trojans, rootkits, spyware and more Real-Time Protection – using web-assisted technology to defend against the very latest malware threats
Instant Safety Checks – providing an easy way to check files, applications and websites သူ့ထက်နည်းနည်းမြင်တာကတော့ Internet Security ပါ။ဘာတွေထူးသလဲ ဆိုရင်
အင်တာနက်ကနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်လာမယ့် threats တွေ နဲ့ virus တွေကို ကာကွယ်ပေးမယ်
Keyloggerတွေကို ကောင်းကောင်းဖမ်းနိူင်တဲ့အပြင် မိသာားစု့ လုံခြုံရေးအတွက်ကလေးတွေမကြည့်သင့်တာတွေမကြည့်အောင် မဖွင့်နိူင်အောင် လုပ်ထားလို့ရတယ်အသေးစိတ်တော့အောက်မှာဆက်လေ့လာပေးပါ ခင်ဗျာ။
သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ 59.95 ဒေါ်လာလောက်ပေးရပါတယ်။သူလည်းအတူတူပဲ ၁ယောက်ကနေ ၁၀ယောက် အထိ တွဲသုံးလို့ရပါတယ် Anti-Malware Protection — for real-time defences against computer viruses and Internet threats Internet Protection — to secure your data and your money when you’re banking, shopping or surfing online Identity Protection — via Kaspersky’s Virtual Keyboard and Secure Keyboard technologies Anti-Phishing Protection — to prevent cybercriminals from collecting your personal information Advanced Parental Control — that helps keep children safe when they’re onlineဒါကတော့ Kaspersky ရဲ့ထုတ်ကုန်ထဲမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Pure ပါ နာမည်လည်းကြီးပါတယ်လူတိုင်းလည်း သိပ်မသုံးနိူင်ပါဘူး။သူ့ကိုသုံးပြီးရင်လည်း အခြား Antivirus ဆော့ဝဲတွေကို မသုံးတော့ပါဘူးအဲ့လောက်ထိ လုံခြုံရေးကောင်းတယ်။ရုရှား ကထုတ်တာ ဆိုတော့လည်း နာမည်ကြီးပြီပေါ့Security ဖောက်တာတွေတော်တော်များများက ရုရှား က လာတာများတယ်။အဲ့ဒီတော့ ဖောက်နိူင်ရင်လုံခြုံရေးအတွက်လည်း ပြင်ဆင်မှု့အားကောင်းပါတယ်။ PURE 3.0 ကို ဘယ်လိုပြောထားသလဲ ဆိုရင်ကွန်ပြူတာတင်မဟုတ်ဘူး မိမိအိမ်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်ပါအသုံးပြု့သင့်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ကွန်ပြူတာထဲမှာဆိုရင်လည်း DIGITAL ပစ္စည်းတွေ အားလုံးကို PURE လေးနဲ့ ကာကွယ်ထားနိူင်ပါတယ်အသေးစိတ်တော့ အောက်မှာ ဆက်လေ့လာပြီးတော့ အသုံးပြုချင်လို့ ဒေါင်းမယ် ဆိုရင်လည်းအောက်မှာပေးထားပါတယ်။ PURE 3.0 တခု့တည်းပါ။windows XP ကနေ windows 8 အထိ အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်
အထဲမှာ update key လည်း ပါဝင်ပါတယ် ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 179 MB ရှိပါတယ်
For the ultimate PC security solution, choose Kaspersky PURE 3.0 Total Security. It delivers everything you need to protect your PC – including your digital identity and your documents, photos, music and passwords – against the latest, sophisticated malware and Internet threats. With special features that add further layers of protection when you’re online shopping or banking, Kaspersky PURE 3.0 also secures your money and your accounts against cybercriminals
TUSFILES | SHAREBEAST ကိုလတ်(ကျွဲဆင်း)
Kaspersky PURE 3.0 Total Security ensures the ultimate PC security solution and protects your computer against all types of information threats in real time. It secures your personal data from loss and unauthorized use, protects children and teenagers from threats related to computer and Internet usage and manages the security of all computers within your home network from any single computer. Kaspersky PURE gives you much more than just antivirus software. It delivers everything you need to protect your PC including your digital identity and your documents photos music and passwords against the latest sophisticated malware and Internet threats. With special features that add further layers of protection when you are online shopping or banking, Kaspersky PURE 3.0 also secures your money and your accounts against cyber-criminals.
Operating Systems: Windows XP Vista Windows7Windows 8 32-bit & 64-bit
← List of Cool Emoticons for Facebook Chat	မိမိစိတ်ကြိုက်သီချင်းလေးတွေကို RingTone လုပ်ဖို့အတွက် Ringtone Maker v1.01 Apk →